Filtrer les éléments par date : mercredi, 17 juin 2020
mercredi, 17 juin 2020 19:44
Antanamitarana-Antsiranana II: Omby halatra novoina tao anaty faritry ny sekolim-panjakana
Taolana sisa hitan’ny tompony tamin’ireo omby telo tao anaty faritry ny EPP Antafiamalama, Kaominina Antanamitarana, Distrika Antsiranana II. Very nisy nangalatra tao Sakaramy ireo omby ireo ny alin’ny 12 hifoha ny 13 jona lasa teo, omby izay eo amboditranon’ny tompony no mipetraka.
Nanokatra fanadihadiana ny Zandary ikarohana izay mety ho ambadik’izao halatr’omby izao.
Natolotra ofisialy ny talata 16 jona 2020 ny fahazoan-dàlana ara-tontolo iainana ho an’ny tetikasa Sahofika, fanorenana foibe famokarana herinaratra hatramin’ny 192 MW azo avy amin’ny rano, izay ho tanterahan’ny orinasa NEHO (Nouvelle Energie Hydroélectrique de l’Onive).
Tanjon’ity tetikasa goavana ity ny hamokatra herinaratra avy amin’ny angovo azo havaozina ho an’ny tambazotra mampifandray an'Antsirabe sy Antananarivo. Ny orinasa JIRAMA no hisahana ny fitsinjarana izany herinaratra izany.
mercredi, 17 juin 2020 19:29
Ambatolaona: Zandary Adjidà iray mamo nanakorontana sady nanambana basy ireo namany
Zandary isan’ireo nalefa hamita iraka hanao tantsoroka ireo namany ao amin’ny « Poste Avancé » eo amin’ny sakana ara-pahasalamana teo Ambatolaona, lalam-pirenena faharoa ity Adjidà ity.
Nentin’ny hamamoana izy ny 10 jona 2020, ka sady nakorontany no nandrahona hitifitra tamin’ny basy teny an-tanany. Nandray andraikitra avy hatrany ireo lehibe mpifehy azy. Mety ho tonga hatrany amin’ny fanesorana azy tsy ho isan’ny fianakaviamben’ny zandary intsony ny raharaha.
mercredi, 17 juin 2020 19:21
Halatra vola 20 tapitrisa Ariary: Mpiasan'ny banky miisa enina no voasambotra
Rangahy iray no nisy niantso tamin'ny findainy fa nisy vola 20 tapitrisa Ariary ana orinasa iray lasa ao amin'ny kaontiny ka tokony haveriny amin'ilay olona niantso azy izany satria diso kaonty ilay orinasa nandefa ilay vola.
Rehefa nojeren'ilay rangahy ny kaontiny dia tao tokoa ilay vola saingy nangataka taratasy fanamarinana hanaporofoana fa an'ilay olona niantso azy tokoa ilay vola vao hamerina izany izy. Taorian'izay dia nisy niantso foana ilay rangahy no sady miova laharana finday hatrany ireo olona miantso azy no manao fiteny mahery ka tonga hatrany amin'ny fandrahonana azy ho faty mihitsy.
mercredi, 17 juin 2020 18:57
Vatofotsy-Antsirabe: Lehilahy niampita arabe naratra tsy nahatsiaro tena nodomin’ny moto
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teo amin'ny manodidina ny Piste Vatofotsy ny tolakandron'ny Alarobia 17 jona. Lehilahy tokony ho 40 taona no niampita arabe no nofaohin'ny moto nanao taikin-droa izay mpivady. Tampoka ny fisehon'ny loza satria tsy nanam-po ny fiampitan'ilay rangahy ilay mpitondra moto ka niara-nianjera ireo olona niisa telo.
Lavo tamin’ny arabe, ary naratra tsy nahatsiaro tena, ilay lehilahy niampita. Ireo mpivady nitondra ny moto kosa dia teo ho eo ihany ny fahavoazany.
Nitangorona nijerijery fotsiny ny maro fa tsy nitady vahaolana ka efa ho antsasakadiny aty aoriana vao nahita hitondrana ireo niharam-boina any amin'ny hopitaly.
mercredi, 17 juin 2020 18:39
Tennis: Hisy ny fifaninanana « Roland-Garros »
Raikitra fa hisy ny fifaninanana tennis iraisam-pirenena « Roland-Garros » amin’ity taona ity. Hotanterahina ny 27 septambra ka hatramin’ny 11 oktobra 2020 ao Parisy renivohitr’i Frantsa izany amin’ity taona ity.
mercredi, 17 juin 2020 17:29
Fanamboarana ny Museographie Rova Manjakamiadana: Mitentina 8 378 140 000 ariary
Mba tiako ho fantatra, taiza moa izany ny appel d'offre momba ireto fanamboarana ny Rova ireto raha tody hatramin'ny farany ity tolotra ity.
Aiza ao amin'ny teti-bolampanjakana izany fa niezaka nitady aho fa tsy hitako, sao afaka mitondra fanazavana ianareo tompon'andraikitra.
Nitady momba ity orinasa frantsay Présence France izay manana ny foibeny ao La Madeleine France, orinasa somary kely ary sahirana ara-bola izy raha ny momba azy, inona no antony niantefan'ny safidy ho any aminy?
180 andro no fetran'ny asa, raha ny daty novambra 2019, dia tokony efa vita ny asa, ka aiza ho aiza izay asa izay izao, raha tena nandeha ilay tolotrasa.
(Dika mitovy nalefa any amin'ny serasera présidence)
Ny trosa anatiny kosa, izay trosa avy eto an-toerana, dia mandrakotra ny 23.3% mitentina 3 483.9 miliara ariary, na 1 050.6 millions USD ny taona 2018, ary novinaina ho 3 877.2 miliara ariary ny taona 2019.
(Loharano Teti-bola 2020, sary fampihaingoana)
17 juin: Journée Mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse.
mercredi, 17 juin 2020 11:18
Fampandrosoana ifotony: Omeo ny faritra ny fitantanana ny hareny sy ny fampandrosoana ao aminy
Higadona ny faha 60 taona nilazana niverenan'ny fahaleovantenam-pirenena. Raha olombelona dia efa mihilana mitsidika ny fahanterana, zafikely efa misy.
Fa mbola ny tantara tamin'ny 14 oktobra 1958 ihany aloha hatreto no misy. Ny Frantsay no nanapa-kevitra ananganana ny Repoblika Malagasy mpikambana ao anaty Communauté française, ary izy no nanendry ny Filoha n'ny goverenamanta Malagasy, izay tetezamita ho any amin'ny Lalampanorenana vaovao.
Tonga ny 26 jona 1960, dia nolazaina fa mahaleo tena i Madagasikara.